ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကျွန်မ မကျေလည်တဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေနဲ့ လူမှုရေး ဦးတည်ချက်များ
ကျွန်မ မကျေလည်တဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေနဲ့ လူမှုရေး ဦးတည်ချက်များ
ညီမငယ် ဘာညာက သတင်းစာ ဖတ်ပါဦး ဆိုလို့ ဖတ်ရင်း ဒီခံစားချက်ကြောင့် ဒီပို့စ် ရေးဖြစ် ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း မြန်မာ့အလင်းမှာ မထူးခြားသလို ရှိတဲ့သတင်းနဲ့ ထူးခြားသလို ရှိတဲ့ သတင်း ၂ခု တက်လာ ပါတယ်။ မထူးခြားသလို ရှိတာက ဆို၊ က၊ ရေး၊ တီး ပြိုင်ပွဲ သတင်း နဲ့ ထူးခြားသလို ရှိတာက အ၀တ် မလုံတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ပြန်ဖြုတ်သိမ်းတဲ့ သတင်းပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ အပေါ်ယံကြော ကြည့်လိုက်ရင် အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်း သလိုလို ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ် နီးပါးက ထွက်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စက္ကန့် ဆိုတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ် သီချင်းခွေ ထဲမှာ ကဲသာကဲ ဆိုတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို မထင်မှတ်ဘဲ နားထောင် ခဲ့မိပါတယ်။ ဟစ်ဟော့ပ် သီချင်းကို ကျွန်မ မကြိုက်တာ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်ပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်တုန်းကမှ ၀ယ်ယူ နားထောင်ခြင်း မပြုဖူးပါ။ ခုလဲ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဖွင့်ထားလို့ မလွှဲသာကြား ကြားခဲ့ရာက နားကြားများ လွဲသလားလို့ ထပ်ကာ ထပ်ကာ နားထောင် မိပါတယ်။ အံ့သြတကြီးနဲ့ပေါ့။ စာသားက
“မင့်ကောင်မလေးသာ ခေါ်လာခဲ့… ဆွဲမှာပဲ… ကဲသာကဲ” တဲ့။
မြန်မာ့ ရိုးရာ အစဉ်အလာမှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစား၊ မိန်းမ ဆိုတာ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားရတဲ့ အထိ စည်းစောင့် ရပါတယ်။ ခုတော့ လူငယ်တွေကြား ရေပန်းစားတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ် သီချင်း ရေစီးကြောင်းကို ခုတုံး လုပ်ပြီး လူစင်စစ်က တော်သလင်းခွေးလို ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေး မြှောက်ပေး သလို ဖြစ်တဲ့ ဒီ သီချင်းခွေ ကိုတော့ ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီခွင့် ပြုပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ စစ်စစ် ဖြစ်တဲ့ သီးလေးသီး အငြိမ့်ခွေ ဖြန့်ဖြူး ခွင့် ကျတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကန့်သတ် ပိတ်ပင် ထားလို့ လက်သိပ်ထိုး ကူးယူ ကြည့်ရှု နေတာ ကိုကျ ဥပဒေ ပုဒ်မ တပ်ကာ ဖမ်းဆီးတာ ဘာသဘော ပါလဲ။
မြန်မာ့ ရိုးရာ အစဉ်အလာ စစ်စစ် ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန် တွင်း သံချပ် ထိုးတာကိုကျ ပိတ်ပင်ပြီး ဘီယာနဲ့ အရက် ကြော်ငြာ မဏ္ဍပ် တွေပေါ် က နောက်ကျော တွေ မှာ အ၀တ်ကို မပါ ကြိုးလေး ၂ပင်သာ ချည် ထားတဲ့ ညဉ့်ငှက်မယ် တဖြစ်လဲ ကချေ သည် များကို လွတ် လပ်စွာ ကခွင့်၊ ကဲခွင့် ပေးထားတာရော ဘာအတွက်ပါလဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ကြည့်လဲ လုပ်ကြ ပါ ပေါ်လစီ ချမှတ်သူ၊ အကောင်အထည်ဖော်သူ ဥပဒေ ပညာရှင်နဲ့ တရားသူကြီး ဆိုသူ တို့ရေ…
အ၀တ် မလုံတဲ့ ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖြုတ်သိမ်းတာ မိုးကြိုးပစ်လို့ ထန်းလက်နဲ့ ကာသလား ဆိုတာ လေးလဲ တခု ထောက်ပြ ချင်ပါသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီလို အ၀တ်တွေ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား နေတဲ့ ဆိုင်ကြီး ဆိုင်ကောင်း ခမ်းနားတဲ့ ဆိုင်တွေကို ဘယ်သူတွေ ပိုင်ပါသလဲ။ ဘာလို့ ရောင်းခွင့် ရနေ သလဲ။ ဒီလို မလုံခြုံတဲ့ အ၀တ်တွေ ၀တ်ဆင် ပြသ နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှိုးပွဲတွေကို ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင် ကျင်းပ နေသလဲ။ ဒီလို မလုံခြုံတဲ့ အ၀တ်တွေ ၀တ်ဆင်ပြီး ဧည့်ခံ နေတဲ့ ဘီယာဆိုင်နဲ့ ကာရာအိုကေ ဆိုင်တွေကို ဘယ်သူတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားသလဲ။ ဒါတွေကို ဘယ်သူက ဖြစ်ပွားခွင့် ပေးထားသလဲ။
ခုဆို ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းနဲ့ တခြား လမ်းတွေက ပလက်ဖောင်း တွေပေါ်မှာ အပြာ ကား တွေကို ပေါ်တင် ခင်းကျင်း ရောင်းချ ရုံသာ မက ယောက်ျားသုံးနဲ့ မိန်းမသုံး လိင်အင်္ဂါ ပစ္စည်း အတု များကိုပါ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ် ခင်းကျင်း ရောင်းချ နေတာတွေကို ဘယ်သူကမှ မဖမ်းတဲ့ ကိစ္စ ပါပဲ။ ဂျေဂျေ နိုက်ကလပ်မှာ အ၀တ် မပါဘဲ ကနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကြားဖူးတာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာ လောက် ကြာနေ ပါပြီ။ နိုင်ငံခြား ဘာသာ သင်တန်း တစ်ခုမှာ ယောက်ျားလေး အယောင်ဆောင် တက် ရောက် နေစဉ်က ကိုယ့်ကို ယောက်ျား ထင်လို့ သင်္ဘောသား လောင်းလျာများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြော ဆိုနေ တာကို နားနဲ့ ဆတ်ဆတ် ကြားဖူး ခဲ့တာပါ။ ပိုဆိုးတဲ့ အဖြစ်က သိမ်ကြီးဈေး ၀န်းကျင်က အခန်း တွင်း ဘီယာဆိုင်များနဲ့ အနှိပ်ခန်း များမှာ တည ဖျော်ဖြေခ ကျပ်ငွေ ဆယ့်ငါးသိန်း ပေးရင် လူ ဆယ် ယောက် ထိုင်တဲ့ ၀ိုင်း တစ်ဝိုင်းမှာ ကိုယ်လုံးတီး ဖျော်ဖြေ ရေးမယ် တစ်ယောက်က အရက်ငှဲ့ ပေး၊ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီလောက်တောင် အခြေအနေ ဆိုးသလား။ ဒါမျိုး ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ် ဖြစ်နေပြီ လားလို့ မယုံနိုင် လွန်းလို့ သူငယ်ချင်း များက အမျိုးသား ထံကို ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့ လာပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ များ သက်သေ အဖြစ် လက်ထဲ ရှိနေ ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ဘလော့ စာမျက်နှာ ညစ်ညမ်းမှာ စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် မဖော်ပြ တော့ပါဘူး။ ဒီ လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် တွေက ဘယ်သူတွေ ပါလဲ။ မိန်းမက မိခင်နဲ့ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး တို့ အမျိုးသမီး
စွမ်းဆောင်ရှင်တို့ စတဲ့ အသင်းဝင် ရာထူး ယူထားပြီး ယောက်ျား လုပ်သူက အနှိပ်ခန်း ဖွင့်စား နေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အ၀တ် မလုံတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ဖြုတ်တာလေး တစ်ခုနဲ့ တော့ မိုးကြိုး ပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ့ ကာဖို့ ကြိုးစား တာဟာ သိပ် ကလေး ဆန်လွန်း ပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေဟာ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန် ရှိပါသလဲ။ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ထိုးဖောက်တာ ခံ၇လို့ အနောက် တိုင်းကို အပြစ်ပုံ ချမယ် ဆိုရင်တော့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီး ဌာန မလိုအပ်တော့ တာမို့ ဖျက်သိမ်း လိုက်ဖို့သာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီဝန်ကြီး ဌာန ရှိလျက်နဲ့ ဒီလောက် ဖြစ်နေမှတော့ ရှိဖို့ လိုအပ် သေးလို့ လားလို့ တွေးမိလို့ပါ။ ဒါမှ မဟုတ် သိသိနဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ တမင် ပေးဖြစ် ထားသလား ဆိုတာလဲ တွေးမိ ပါရဲ့။
ဘယ်အမျိုးရဲ့၊ ဘယ်မျိုးရိုးရဲ့ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်း လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်ပွားခွင့် ပေးနေတာ ပါလဲ။ လူမြင်တာတွေကျ ၀ါဒ ဖြန့် ကောင်းရုံ လုပ်ပြ နေပြီး အနှစ်သာရ ကိုကျတော့ ပြောင်းပြန် လှန်နေတာ၊ ခွင့်ပေး နေတာ အမြင် မတော်တာ ကြာလှ ပါပြီနော့…
နအဖခေတ် ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်မှု အောက်က မြန်မာပြည်တွင်း လူငယ်များရဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုနဲ့ အင်္ဂလန်မှာမွေး အင်္ဂလန် နိုင်ငံသား အဖေနဲ့ အင်္ဂလန်မှာ ကြီးပြီး မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ၈နှစ်သား ကတည်းက ခွဲခွာ ခဲ့ရတဲ့ သားငယ် ကိုထိန်လင်း စကော့တလန်မှာ ပါလီမန် တက်ရောက် နေပုံကို နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီး လူကောင်း များရဲ့ သားများရဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ် နိုင်ပါသေးတယ်နော်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 3:05 AM
i also hate this J-me song.
I like this post very much.GOOD!!!
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ် .....
wai naing said...
Wow! Outstanding Post.
Some hiphopper in Myanmar are very rude. In another song, they ask each other "Hey,are there any girl wearing g-string? They think this is very modernized. They actually copy the bad things from foreign.
I also hate some of them.
:) ... Does Daw Su kyi's son wear the national dress everyday ? You can't really compare that two photos. These punks are not going to parliament. I've seen that guys in Ygn..
They fancy punk culture . So, they wear punk fashion . And I lived in Myanmar _ Kachin , Shan , Mon, Yangon , Magway,Mandalay, Bago..and I have been to7states and5divisions..only the Tanintaryi and Kayar left to go and stay.. For past 19 years, I 've seen that punks group only in Yangon- near Shwegonedai and Myaynigone.. I know them.
Punk fashion came together with Punk Music.It's just like Man-U fans wearing Man-U shirts.
It's quite disgusting . U takeaphoto ofapunks group and Daw Su Kyi's son in national dress. Then, u blame on Government . :)
A photo cannot represent the actual situation. I am in London now. Everybody knows England isaWell-developed Democracy Country. But, I can still take photos of homeless,hobos,unbelieveable dirty alleys, naked party girls , Drunken gangs and uncountable numbers of punk groups .On the other hand, I can takeaphoto of " YaykyitawaTin " on Shwedagone Pagoda. Then, I can say " Look! Myanmars are better than British , Our culture is better than British's . How peaceful ! " .. :)
But,I can't do like that.As I say, photos cannot represent the actual situation. Photos of hobos ,homeless, litters ,gangs are not England. England is much more than that. British Culture is more than that. Their governing is more than that.
The same to our country.5punks cannot represent 56 millions. If you want to see, I can send you millions of photos of myanmar people wearing traditional dresses,including photos of teenagers.
Obviously, Daw Su Kyi's son cannot wear the myanmar dress everyday. Please find out UK's weather. :)
I love Longyi and shirt more than any of teenagers who are at the same age of me ., When I was in myanmar , I wore longyi and shirt 24 /7 .. Even the time I went to Stage shows.I started wearing it when I was 11 and I sticked it to it until I left .
But, I cannot wear it here. Now, I wear T-shirts and pants and Jeans. So , are you gonna take my photo and gonna say "Hmu Hein is idiot . He doesn't wear our culture . .look ! it's because of U Than Shwe's Government " .. :P
Very funny.. Just tell me exactly why Daw Su Kyi marriedaBritish ? I have readapost of yours ,saying " A Thai Professor said " Daw Su Kyi is very good girl..She never goes to clubs.. She always wear myanmar dress .. " .. I tell you what.... Myanmar dress for women is very attractive to eyes if the wearing person hasaslim and well figured body.. But, if the wearing person is fat or hasabig belly, it become terrible . Because that dress shows exactly what you are .. I am 100% sure that Daw Su Kyi wore the dress to be more attractive and popular ..
If she really cares about our culture why did she marryaBritish ? Just tell me exactly why.. Don't talk any other non-sense things like she never goes to clubs.. she always wears myanmar dress .. :P
And , asaforeigner, to becomeaOxford Graduate is not as difficult as british citizens.. IF you can afford to pay the fees and you are notacompletely idiot , it 75 % sure to getaBA from Oxford.The most important thing is if you can pay.
I never heardastory that Daw Su kyi had to work part-time or illegal full-time hours to be able to pay for her education and to make her living when she was in school.And , I never heard she was on scholarship. :P
I tell you what if all the myanmar students in UK have the financial surpport like Daw Su Kyi, I can gurantee7out of 10 can getaBA (PPE) from Oxford. It's the real chance to be able to study without worrying for money in England. :) It's too obvious she is notalengdary outstanding person as u,guys,describe.
Because, She finished her B.A from Oxford.. So, Why did she have to go to London University for PH.D? London University is suchacrap comparing to Oxford... I have the answer..
Ph.D of Oxford doesn't depend on money. :)
မှူးဆိုတဲ့ သူရေ.. ရှင်ဘာကို မှူးသလဲတော့ မသိဘူးနော်.. ဓာတ်ပုံလေး ၂ပုံတည်းကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောတယ်လို့ ထင်တာ ရှင် တော်တော် အမြင် ကျဉ်းသေးတာပဲ။ ကိုယ်ပြောချင်တာ ငါစကား နွားရ ပြောဖို့ အတွက် လိုချင်တဲ့အချက်ကို တဖက်သတ် ဆွဲပြီး ပြောသွားလိုက်တာ အထက်တန်း အဆင့် အောင်သူတောင် ရှင့်စိတ် ဘာကို ဦးတည် နေတယ် ဆိုတာ သိလောက်ပါရဲ့…
ကျွန်မရဲ့ ပို့စ် ခေါင်းစဉ် အရရော၊ ရှင် ထောက်ပြတဲ့ အချက် မရောက်ခင် စာပိုဒ် ကိုးပိုဒ် စလုံး ကပါ ကျွန်မရဲ့ အဓိက ဆိုလိုချက်ကို ရှင်းအောင် ရေးပြ ထားလျက်က တခြား ရှုထောင့်ကို မရောက်ရောက် အောင် အတင်း ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ ရှင့် ကောမန့်က ဝေဖန်ရေး အရည်အချင်း မပြည့် လှဘူးရှင့်။ နောက်ပြီး ကျွန်မကလဲ မြန်မာ နိုင်ငံ နေရာ အနှံ့ မရောက်ဖူးသူ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီရုပ်နဲ့ လူတွေက ကျွန်မ ကလေး ဘ၀ ၉၀ ပြည့်လွန် နှစ်များ ကတည်းက ရန်ကုန်နဲ့ မန်း သင်္ကြန်တွေမှာ ကျွန်မ မြင်ဖူးပေါင်း များလှပြီ။ ဟုတ်ကဲ့ အစိုးရ ရုံးစိုက်တာလဲ ဒီမြို့ကြီး တွေပဲ မဟုတ်လား။ ဒါတောင် ရှင်က ကျွန်မရဲ့ စာပိုဒ် ကိုးပိုဒ်ပါ အချက် တွေကို မဆွေးနွေးဘဲ နအဖ ကို အတင်းကြီး ကာကွယ် ပေးနေတော့ မဟုတ်မှ လွဲရော ရှင်က နအဖ တစ်ယောက် ပဲလား ဒါမှ မဟုတ် နအဖ ဆီက အခွင့်အရေး တစုံတရာ ရထားလို့ ဒီလို ရေးသလားပဲ မှန်းကြည့် နေမိတယ်။
ပန့်ခ် ဂီတ ခုံမင်သူ ၅ယောက်က လူဦးရေ ၅၆သန်းကို ကိုယ်စား မပြုသလို ရေကြည်တော် ၀တ်အသင်း က လူရာဂဏန်း ဟာလဲ လူဦးရေ ၅၆သန်းနဲ့ တကွ ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ် တခုတည်းကတင် ထွက်တဲ့ အနှိပ်ခန်း ၃၀၀ ကျော်က သောင်းချီ နေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ တွေကို ကိုယ်စား မပြုပါဘူး။ နောက် ပြီး သမိုင်း ခ၀ဲခြံ တ၀ိုက်က တစ်ရက်ကို လူ၃၀ကျော်ကို ဒိုင်ခံ ဗိုက်ဖျက်ချ ပေးနေတဲ့ အရပ် လက်သည်တွေကို ကိုယ်စား မပြုပါဘူး။ ဒီလို ပြည့်တန်ဆာတွေ များပြား နေတာ၊ ဒီလို အကျင့် စာရိတ္တ ပျက်စီးမှု များပြား လာအောင် အပြာကားတွေ ပေါ်တင် ရောင်းခွင့် ပေးနေတာ၊ လိင် အပိုပစ္စည်းတွေ ပေါ်တင် ရောင်းနေတာကို မျက်ကွယ် ပြုထားတာ နအဖ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန် ရှိသလဲ ပြောလိုက်စမ်းပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မြန်မာ့ရိုးရာ ထိန်းသိမ်း ၀တ်စားတာ ကိုယ်လုံး အလှ ပေါ်ချင်လို့လို့ ရှင် ထပ်ခါ တလဲ စွပ်စွဲ နေတော့ ရှင့် အမေ၊ ရှင့်အဘွားတွေ ဘာအ၀တ် အစား ၀တ်ခဲ့လဲ လို့ ကျွန်မ ပြန်မေး ပါရစေ။ ကိုယ်နဲ့နှိုင်းတော့ မရိုင်း ပါဘူးတဲ့နော်။ ဒါဆိုရင် ရေကြည်တော် ၀တ်အသင်းက ငြိမ်းချမ်းစွာ ၀တ်စားပါတယ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဘာအ၀တ်အစားများ ၀တ်ကြ ပါလိမ့်။ ရှင့်စကားနဲ့ရှင် ပဲ ပြန်ဖြေစမ်းပါဘိ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောက်စဖိုဒ်မှာ ကျောင်းတက် နိုင်တာကို ကျွန်မ အထင်မကြီးပါဘူး ရှင်းတယ်နော် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းလဲ တက်ဖူးတာပဲလေ ဒါပေမယ့် အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ် တက္ကသိုလ်က စကားရည်လုပွဲ စင်မြင့်တွေ ပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်လောင်း အသီးသီးနဲ့ စကားရည် ယှဉ်လုပြောဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ပေါ် တက်လိုက်တိုင်း ပြိုင်ရဲသူ မရှိ ဖြစ်ရ လောက်အောင် အချက်အလက်ကျကျ ထိထိမိမိ ဂုဏ်သရေ ရှိစွာ စကားပြောတတ်လွန်းတဲ့ သူ့အရည် အချင်းကို လေးစားတယ်။ မြန်မာကို သိမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကို ရအောင် ယူပြီး မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြန်လေးစား လိုက်နာ ခိုင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကို သဘောကျတယ် ဒါပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူများလင်ကို ခိုးတဲ့သူမှ မဟုတ်ဘဲလေ.. လူပျိုလူလွတ် မင်းမျိုး မင်းနွယ် ကို ရအောင် ယူပြီး မြန်မာ့ အရေးကို ပြန်လုပ်ခိုင်း နိုင်တာမို့ ကျွန်မကတော့ နိုင်ငံခြားသားကို ယူတဲ့ အတွက် Globalization ခေတ်ကြီးမှာ သူ့ကို ဘယ်လိုမှ မအောက်မေ့ဘူးရှင်။
:)..When Daw Su Kyi marryaBritish , you say " Globalization" ... :) ( Just for laughs ) . So, why can't you just consider "it's globalization " when you see western culture like Punks in myanmar ?
And, when Daw Su Kyi married to Dr. Aris, it's 1972. see ?1972... Not 2007...Not 2005 .
If you say Myanmar have 5-figure pros, What about ur thailand ? what about America ? What about England ? What about Singpore ? no pros at all ?Or u think they have less pros than Myanmar ? I tell you what Myanmar isalot better than UK or US. Wanna see proofs ?
Or what about Patpone ?
America has no sanction on any of its industry .Neither of Thailand, Singapore and England has no sanction as well.. face the truth . Who made 1996 Visit Myanmar Year to beafailure ? Why foreign investments step back ?
Who welcomed america's sanctions ? Why myanmar's textile industry closed down ? Where the female workers of that industry now ?
U Than Shwe's daughter will never become pros because of Sanctions.. So, where did that sanctions effect ?Who become pros ?
My mother is Kachin .But she didn't wear Kachin dress when she was in Mandalay University . Are you gonna say "She doesn't love her culture " ? :)
My grandmother is Mon., She lived in Putao and Myitkyiinar for her whole life .. She didn't wear Mon Dress :) why ? Arer you gonna say she doesn't love Mon culture ? :)
I didn't say you are stupid or not educated person. I didn't tell anthing about your personal life . Why did you do that to me ?
Has Daw Su ever worked in her life for her living ? Who do u think made Daw Su's mother to becomeaEmbassador ?(she is justanurse ) How do you think Daw Su was able to go to Oxford University ? Why do u think they have enough money for their lives ? ( General Aung San didn't do any of money business )
Now, hunger strike ? What is she asking ? Is she asking for Myanmar people ? Or is she asking for her personal matters ? :)
ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့မိသားစုကို တော်တော် တိုက်ခိုက်ချင်ပုံ ရတယ်နော် .. ကျွန်မရဲ့ ပို့စ်က အဓိက အကြောင်းအရာတွေကနေ သွေဖီပြီး ဒီမိန်းမ တစ်ယောက်ကိုပဲ ဦးတည်နေတာ ကျွန်မဖြင့် ရှင့်ရဲ့ သူ့အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ မနေနိုင် လောက်အောင်ပါပဲ :P
တစ်အချက်က ကျွန်မဟာ racism ကို မနှစ်သက်ဘဲ nationalism ကိုပဲ နှစ်သက်ပါတယ်။ လူမျိုးရေး အမြင် ကျဉ်းမှုကို လက်မခံ ပါဘူး။ ဘုရားဟာ သာကီဝင်ကိုမှ ရွေးပြီး တရားမဟော ပါဘူး။ လက်ထပ်ဖို့အရေး လူမျိုး ရေး ရွေးချယ်မှုဟာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ တခြားစီပါ။ ရှင့်အဘွားက မွန်ဖြစ်ပြီး ရှင့်အမေက ကချင် ဖြစ်တာ ကျတော့ ရော လူမျိုး မတူဘဲ လက်ထပ်တာဟာ ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ဘာထူးလဲ။ ကျွန်မ ရှင့် ဘိုးဘေး မျိုးရိုးကို ထိခိုက်ပြီး ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. သူများ ကို လက်ညှိုးထိုးချင်တာနဲ့ ကိုယ့်စကား တာကျိုး နေတာကို ပြန်စဉ်းစားပါ။ ဘယ်နှစ်ခုနှစ် တည်းက ယူယူ.. မထူးပါဘူး ရှင်တို့ ဘိုးတော်ကြီး ကျန်စစ်သားလဲ မွန်မင်းသမီး ကို လက်ထပ် တာပါပဲ။ နိုင်ငံခြားသူ မိဘုရား ရှိတာပါပဲ။ မိန်းမမို့ယောက်ျားနဲ့ ပြိုင်စရာလား မေးရင် မွန်ဘုရင်မ ကြီး ရှင်စောပုလဲ မြန်မာ ကြင်ယာတော် ရှိတာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို အရည်အချင်း မပြိုင်နိုင်တာနဲ့ တခု တည်း သော အားနည်းချက် မဖြစ် ဖြစ်အောင် လူမျိုးရေး အမြင်တွေ ကျဉ်းပြ မနေပါနဲ့ရှင်။
နောက်ပြီး စကားပြောရင် တိကျ သေချာ ရှင်းလင်းအောင် ပြောရမယ့် အစား ဆုတ်သာ ခွာသာ ဖြစ်အောင် စကားကို လုံးချ ပြောတာ ကျွန်မ လက်မခံ ပါဘူး။ ရှင်ဆိုလိုချင်တဲ့ pros ဆိုတာ ဘာလဲ။ မြန်မာက အမေရိကန် ထက် အင်္ဂလန်ထက် သာတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုလား။ ကလေးစစ်သားလား။ သိပံနဲ့ နည်းပညာ လား။ ဆေးပညာလား။ ဘာပိုသာတာလဲ။ ဟုတ်ကဲ့။ ခု ကျွန်မ ပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်ထဲက သာတာလေး ချရေးပေးပါ။ သက်သေပါ ပြပါ။ မြန်မာ့ ရှေ့ရေး အတွက် မကောင်းတာ လာမပြိုင်ပါနဲ့။ ကျွန်မ အဆိုးရှာဝါဒီ မဟုတ်ဘူး။ ရှင်က ပက်ပုန်းကို ဥပမာ ပေးတော့ ကျွန်မက ပြန်ဥပမာ ပေးမယ်။ ထိုင်းက ပက်ပုန်းထက် ဆိုးတဲ့ ပတ်တယားမှာတောင် တိုင်ပတ် အကကို လမ်းမပေါ် စင်ထိုးပြီး မကဘူး။ မြန်မာပြည်က အင်းလျားလမ်းနဲ့ မန်းလေး နန်းမြို့ရိုးရှေ့မှာ သင်္ကြန်တွင်း လမ်းမပေါ်က စင်ပေါ်မှာ တိုင်ပတ် အက ကတာ မြန်မာက ပိုသာတယ် ထင်လား။ ထိုင်းမှာ ပတ်တယားမှာတောင် လိင်အတု ပစ္စည်းကို ပလက်ဖောင်းပေါ် တင်မရောင်းဘူး ရန်ကုန်က ဆူးလေ ဘုရားလမ်းမှာ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ် တင်ရောင်းတာ မြန်မာက ခေတ်မီတယ် ကောင်းတယ် ထင်လား။ ဒါဆို ရှင့် အဆင့်ကို ကျွန်မ မှန်းလို့ ရမယ်။
ဒေါ်စုရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု မူကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး အပိတ်ခံရတယ်လို့ ရှင်ယုံရင် ဒေါ်စုကို ရှင်တအား အထင်ကြီးတာလား၊ တမင် အပြစ်ပုံချင်တာလား တခုခုပဲ။ ဒေါ်စုက ဘာမို့လို့ သူပြောတိုင်း တခြားတိုင်းပြည် က အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ အကျိုးစီးပွား အထိခိုက်ခံပြီး ဒေါ်စု စကား နားထောင်ရမှာလဲ။ Visit Myanmar Year 1996 မအောင်မြင်တာ ဘာလို့လဲ သိချင်လား။ ကျွန်မသာ နိုင်ငံခြားသားဆို ရန်ကုန် မြို့လယ်ခေါင် လမ်း သွားရင် အိမ်သာ တက်ချင်လို့တောင် တက်စရာ အိမ်သာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ သွားလေရာ မီးပျက် နေမယ့် နိုင်ငံကို လာမလည်ချင်ဘူးရှင့်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ဒေါ်လာကို ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ အက်ဖ်အီးစီနဲ့ အနာခံ လဲရမယ့် နိုင်ငံကိုလဲ မလာချင်ဘူး ရှင်းတယ်နော်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အီရတ်တို့ အာဖဂန်နစ္စတန် တို့လို စစ်ပွဲတွေမှာ စစ်ရေး သတင်းထောက် လုပ်ပြီး တိုက်ပွဲတွေကြား သွားလာ သတင်းယူတဲ့ ဂျပန် သတင်း ထောက် ခန်းဂျိ နာငအိ တစ်ယောက် ဆူးလေ ဘုရားရှေ့ လူပုံအလယ်မှာ ကင်မရာ မြှောက်ပြလျက်က အနီး ကပ် တေ့ဖြုတ် အသတ်ခံရလောက်အောင်တောင် စစ်သားကို စစ်ရေး နားလည်အောင် သင်မထားဘဲ ခါးပိုက် ဆောင်တပ်လို အသုံးချ နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပိုတောင် လာမလည်ချင်သေးတယ်ရှင်။ စစ်သားတစ်ယောက်ကို rules of engagement နဲ့ rule of shooting လောက်မှ သင်မပေးထားဘဲ လက်နက်တပ်ပေး ထားတဲ့ တိုင်းပြည်များ မလာရဲပေါင်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလား။ ခုပေါ်လစီ တမျိုး၊ နောက်နေ့ နောက်ဝန်ကြီး ပြောင်းရင် နောက်ပေါ်လစီ တမျိုးနဲ့ အုပ်ချုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး မတည်ငြိမ် အာမခံချက် မရှိတဲ့ နိုင်ငံကို ကျွန်မသာ လုပ်ငန်းရှင် ဆိုရင် လာ စီးပွားရေး မလုပ်ဘူးရှင်။ ဒေါ်စု တားလို့တော့ မထင်လေနဲ့။ ဒေါ်စု ခေါ်လဲ မလာဘူး။ ရှင်းပလား။ ကိုယ့် အတွက် အကျိုးစီးပွား မသေချာတဲ့ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်ကို ဘယ်နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်မှ လာရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု မလုပ်ဘူး။
U Than Shwe's daughter will never become pros because of Sanctions ဆိုတဲ့ စာကြောင်း ကျွန်မတော့ နား မလည် ဘူး သူကမ္ဘာကျော်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ စိန်စီသောည ဗီဒီယိုခွေကြောင့်ပဲ ဆိုတာတော့ သိပါရဲ့။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ဘာဆိုင်ပါလိမ့်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားတာတောင် ဒီလောက် စိန်သီးအောင် ၀တ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ စီးပွားရေး သာ မပိတ်ဆို့ရင် ဘာတွေ ၀တ်မလဲ မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဖြစ်ခင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဘ၀ကတော့ ဒီလို မချမ်းသာဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ရွံစရာကောင်းတယ်လို့ တိုက်ရိုက်စာသား ရေးပြီးမှ ကျွန်မကို မတိုက်ခိုက်ဘဲ ကျွန်မက ရှင့်ကို ဘာလို့ တိုက်ခိုက်လဲ ဆိုတဲ့ စာသား ရေး ထွက်သေးတယ် ဆိုတော့ ရှင်ဘယ်လိုလူစားပါလိမ့်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာစီးပွားရေးမှ မလုပ်ခဲ့ဘဲ ဒေါ်စုတို့သားအမိတွေ ငွေမရှာဘဲ oxford မှာ ကျောင်းတက်နိုင်တာ ဘာလို့လဲ ချည့် ရှင်သိချင်လို့ မေးနေတာလား သိလို့ မေးနေတာလား။ သိတယ်လို့ ပြောပြီးဖြေလဲ ယုံချင်မှ ယုံမှာ ဖြစ်သလို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတာလဲ ဒါမဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ သာမန် သူနာပြု တစ်ယောက်အဖြစ် အကြမ်းဖျင်းပဲ သူများသိပေမယ့် ကျွန်မ လေ့လာဖူးသမျှ ထဲမှာတော့ မြန်မာ့ ပထမဆုံး မိခင်နဲ့ ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း ဥက္ကဌ အဖြစ် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကြောင့် ပါလီမန် အမတ် ဖြစ်ရာက ပိုသြဇာ ကြီးလာ လို့ သံအမတ် ရာထူး မျက်နှာဖုံး တပ်ပြီး ပြည်ပကို နယ်နှင်လိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတာက သူတို့ မိသားစုက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ဆီကနေ အရှက်ရစရာ အမြတ်ထုတ်မှု ဘာတစ်ခုမှ မကျူးလွန်ခဲ့တာဘဲ။
ဒေါ်စု အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတာ ဘာအတွက်လဲ ကျွန်မ မသေချာဘူး။ ကျွန်မနဲ့ တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ကျွန်မ ဒီလောက် အသည်းအသန် စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုလို အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကို တရားဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာ ၅နှစ်ထက် ကျော်ပြီး ဥပဒေမဲ့ အကြောင်းပြချက်မဲ့ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဥပဒေကိုတော့ မြန်မာ နိုင်ငံသား တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မအတွက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်က ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကဲ… ကျွန်မရဲ့ မေးခွန်း တွေ ရှင်ဖြေနိုင်ရင် ပြီးတော့ တခြား အလုပ်မရှိ ဘဲ ကျွန်မရဲ့ ဒီပို့စ်ကို ထိုင်ပြီး misdirection လုပ်ဖို့ အလုပ်တစ်ခုပဲ ရှိတာဆိုရင် ရှင်ဖြေပေတော့နော့။
Is it the same asakachin marryingamon withamyanmar marryingaBritish ? If you mean it, that's fine .. :)
Myanmar is not as bad as US and UK in Crimes rate,Drugs and prostitue,pornography.
Please find out more about 1996 visit myanmar year . And we will talk about it.
If you think Daw Su would have done our country better than the U Than Shwe, that's fine.
But,please think about 17 armed groups who are now at cease fire. Please think about "BA KA TA", "MA KA TA"and all other political parties.
Daw Su is suchatool of U.S. They did exactly the same in South Africa with Nelson Mandela. This is their old method.
ပါလေရာကြောင်ချေးဧ။်စကားကြီး ၃ ခွန်း။။။သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
မာမီမကြိုက်တဲ.ဥပဒေမှန်သမျှမာမီ.အလိုကြဖီဆန်ကြ။သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
စုနိုင်ရင်ချမ်းသာမည်။စုနိုင်သော်လဲပိုပိုမွဲ....။။။သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
ခမောက်ဘေးမှာကြက်ခြေခတ်.ပြည်သူမွဲပီမှတ်...သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
မြန်မာလူထု အတွက် ပါးစပ်ကြီးနှင်. ချစ်မြတ်နိုးတော်မူကြသော
မာမီစုနှင်.တကွ မြင်.မြတ်သော မဟာဂရုဏာရှင် ကိုကိုပွကြီးတို.လင်မယား
ဟိုပိတ်ဒီပိတ် ဆရာကြီး ဆရာလေးများ ဟိုပိတ်ဒီပိတ် ဥပဒေပြုပညာရှင်
များ မြန်မာလူထု ငတ်မသေသေအောင် တနေ.၂၅ နာရီလုံးလုံး
ကြိုးစား အာထုတ် နေကြကုန်သော သူတော်စင်များအား
၅၄ သန်းခွဲသော မြန်မာပြည်သူ လူထုထဲမှ တဦးအပါအ၀င်
ဖြစ်တော်မူသော ပါလေရာကြောင်ချေးမှ ကျေးဇူးဥပကာရ အတိုင်းအဆ
မရှိ တင်ရှိပါကြောင်း ရိုရိုသေသေ လေးလေးမြတ်မြတ် ပြန်ကြားလိုက်
( ၆ယောက် ၃တန်း ပါလေရာ )
စီးပွားရေးပိတ်ဆို.တာထိချက်ကတော.မြို.သစ်တွေကိုတာလာကြည်.ဗျို...........................ပြည်တွင်းပြည်ပကရဲရဲတောက်ကြီးများ၇ဲ.ကျေးဇူးနဲမှတ်လို......အခုမှမဟုတ်ပါဘူး..၈၈.ထဲကစခဲ.တာကိုးဗျ.သမိုင်းနဲ.လာတာနော...ဆန်တပြည် ၁၅ ကျပ်စိန်လွင်ခေါင်းကိုဖြတ် ဘဲဥတလုံးတကျပ်ခွဲစိန်လွင်.ခေါင်းကိုခွဲဆိုပီးမဆလကြီးကိုရဲရဲတောက်ခဲ.ကြတာအောင်မြင်ချက်ကတော...ဒီနေ.ဆန်ဈေးဘဲဥဈေးတွေကိုတာကြည်.ကြပေတော.ခည...............အရေးတော်ပုံကြီးမနက်ဖန်(သို.)ဘယ်သောအခါအောင်ပါစေဂျာ....ပြည်တွင်းကဆင်းရဲသားတွေငတ်မသေမချင်းစီးပွားရေးတွေဆက်လက်ပိတ်ဆို.နှိုင်ကြပါစေ..ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ.ဆုတွေဆယ်ဘီးကားတစိးတိုက်လောက်ရကြပါစေ..အင်တာဗျူးတွေလုပ်နှိုင်ကြပါစေ..စတိတ်မန်.တွေထုတ်နှိုင်ကြပါစေ...ဘာကော်မတီညာကော်မတီ.ဘာအဖွဲ.ညာအဖွဲ.တွေ၎ ၅ ၆ သိန်းလောက်ဖွဲ.နှိုင်ကြပါစေ..စာစောင်အမျိုးပေါင်းသိန်းတရာလောက်ထုတ်နှိုင်ကြပါစေ..သံရုံးတွေရှေမှာနေ.ညမပြတ်အော်နှိုင်ကြပါစေ..အလှူငွေတွေလဲတပွေ.တပိုက်ကြီးရကြပါစေ...အလှူငွေတွေလဲအဘတ်မခံရပဲဝါးစေဝေစားလုပ်နှိုင်ကြပါစေ..နအဖ ကိုဆဲရေးတိုင်းထွာပီး.အချင်းချင်းခွက်စောင်းခုတ်ချင်းဘေးမှ...ကင်းလွတ်နှိုင်ကြပါစေလို...၆ယောက်ပေါင်းမှ၃တန်းအောင်တဲ.ရွှေပြည်သာကမုန်.လင်မယားရောင်းနေရာကအလုပ်လက်မဲ.ဖြစ်နေရတဲ.ကြောင်ချေးမှ ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခည....သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
၂ သန်း ၄သိန်း ၈ သောင်းခန်.ရှိကြ ကုန်သော ရဲရဲတောက် မျိုးချစ်ဖိုးချစ် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.များ ခည
စတိတ်မန်.ရီးယား ၂၀၀၈ အတွက် လျှာထားသော စတိတ်မန်. ၂၈ သန်းပြည်.မှီရေးအတွက် ရဲရဲဝံ.၀ံ. ကူညီပန်းပိုး
အရေးတော်ပုံ.....ဒီမို ၃၀၀၈ ( သို. ) ဘယ်သောအခါ။။။
၆ယောက် ၃တန်း ပါလေရာ ကြောင်ချေး
ဒီမို ၃၀၀၈ ကော်မတီဧ။် ပြောရေးဆိုခွင်.ရှိသူ
Posted by ကိုကိုကြောင်ချေး at 2:09 PM0comments
ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးစားအာထုတ် နေကြကုန်သော ပဲပြုတ်သယ် တော်လှန်ရေးသမားများ အားလုံး သို.
ချစ်ခင်လေးစား အားထားရပါသော ပဲပြုတ်သယ် တော်လှန်ရေးသမားကြီးများခည......
ယနေ.အချိန်အခါသည် ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးဧ။် အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်. အချိန်အခါသို.ရောက်ရှိနေကြောင်းကို...
ပြည်ပရောက် မျိုးချစ် ဖိုးချစ် ငတို ငရှို ဘစ ၁၀၉/၁၁၀ ၃၇၆ ၄၂၀ ၄၀၆ ၃၇၉ ၃၈၀ ၃၇၇ ဘွဲ.ခံ နိုင်ငံရေးပရောဆိတ်ကြီးများ
ဟယ်ရီတန် မျိုးဆက် ၅၅ ၆၆ ၇၇ ၈၈ ၉၆ ၉၉ ၂၀၀၆ ကျောင်းတော်သားကြီးများ
ကိုကိုးကျွန်းအလွမ်းပြေ လက်ကျန် ရ ဦးပါတီမှ ဆရာကြီးများ
မူလလက်ဟောင်း တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် တပ်မှူးပြုတ် မဆလ မထေရ်ကြီးများ နှင်. ဖေဖေစကားမြေ၀ယ်မကျ
နားထောင်ပီး မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် အမြင်.မားဆုံး လွင်.ထူပီးသကာလ ဖေဖေကို သတ်တဲ.လူမျိုးကို လက်စားချေသောအားဖြင်.
ယုံကြည်ကိုးစား ဆီကပ်ပူဇော် အိမ်ဦးနတ် မြှေက်တော်မူခဲ.သော နတ်ဆောင်ဒါး မာမီစု တို.ဧ။် စုပေါင်းစပ်ပေါင်း
ပါတီတွင်းအာဏာရှင် စနစ်ဖြင်.လည်ပတ်နေပီး စတိတ်မန်. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ် မှဂုဏ်ထူးဆောင်
တစ်ရှူးပေပါဝေငှနေသော ခါတော်မှီ အော်ကြောက် ပြေးပျောက် ဂျန်နလေးယှင်းများ ..............................
စသောရေတွက်ခြင်းငှါ မစွမ်းသာသော ပုတ်ကိုထူးပုတ်ကို မြတ်ကြီးများဧ။် မီဒီယာပေါ်မှသတင်းပေးမှုကြောင် ကိုရီးယား
ဇတ်လမ်းတွဲ ကြည်. မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးမှ သီရှိခွင်.ရခဲ.ပါသည်။
ယခုကဲ.သို.အရေးကြီးသောကာလတွင် အထက်ဖေါ်ပြပါ ပုတ်ကိုထူးပုတ်ကိုမြတ် ကြီးများဧ။် ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်
လွန်စွာမှအရေးကြီးကြောင်း ကို ကြောင်ချေးနှင်. တကွ ပြည်သူလူထုကြီးမှ အကြွင်းမဲ.ယုံကြည်ပါသည်။
သို.ဖြစ်ပါရ်ျ ပုတ်ကိုထူးပုတ်ကိုမြတ်ကြီးများ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ ဖြင်. ဓါတ်ရှင်ကြည်.ရင်း အင်တာဗျူးရင်း
ပူပေါင်းလွှတ်ရင်း ကဗျာရွတ်ရင်း ဒုတ်ကောက်သယ်လက်မှတ်လျှောက်ရင်း အလှူခံရင်း ဘလော.ရေးရင်း ဝေစုခွဲရင်း
ခွက်စောင်းခုတ်ရင်း...............ဖြင်. အဆင်ပြေချောမွေ.စွာ တိုက်ပွဲတော်ကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆုံးခန်းတိုင်တိုက်
နှိုင်ရေးအတွက် ကိုကိုကြောင်ချေးနှင်.တကွ ပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးမှ ဘေးဘယာဝေးကွာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်း
အားလုံးကြားကြားသမျှ တွေ.မြင်သမျှ သိရှိသမျှ ပုတ်ကိုထူးပုတ်ကိုမြတ်များ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော...
ကိုကိုကြောင်ချေး ( ပါလေရာ ၆ ယောက် ၃တန်း )
ချစ်ခင်လေးစား အားထားရပါသော မိဘ ပြည်သူ လူထုကြီးခင်ညား....
ယနေ.အချိန်အခါသည် နအဖ စစ်အာဏာရှင် ကြီးများဧ။် အုပ်ချုပ်နေမှုကြောင်.
မိုးတွင်းအခါတွင် မိုးရွာပီး ဆောင်းတွင်းအခါသမယတွင် ချမ်းအေးခြင်း နွေရာသီ
တွင် ပူအိုက်ခြင်း မီးမလာလျှင် မီးစက်သုံးရခြင်း အင်ဗာတာသုံးရခြင်း
ဖယောင်းတိုင်များ သုံးနေရခြင်း နံနက်မိုးသောက် အလင်းရောက်ပါက အိပ်ရာထရခြင်း
မိုးချုပ်ပါက အိပ်စက်ရခြင်း ထမင်းစားပါက ပါးစပ်ဖွင်.ရခြင်း ရေငတ်ပါက ရေသောက်ရခြင်း
အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် မျက်လုံးမှိတ် အိပ်စက်ရခြင်း ..............အစရှိသော ဒုတ်ကောက်
ယခုကဲ.သို. ခံစားနေရသော ဒုတ်ကောက် အပေါင်းများမှ လျှင်မြန်စွာ လွတ်ကင်းရန်
အလှို.ငှါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လမ်းဘေးဈေးသယ်များ သမဂ ( ၂၀၀၈ ) /
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ နွားကျောင်းသားများ အဖွဲ.ချုပ် ( ဗနသ )
ဗမာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောက်ရူးများ အဖွဲ.ချုပ် ( ဗကသ )
ရန်ကုန်တိုင်း လဒူလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ. တို.မှ စနစ်တကျ ဦးဆောင်ရ်ျ
ကြေညာပီးနောက် ဆက်လက်ရ်ျ ပြောကြားလိုသည်မှာ....
မိမိတို.သည် စစ်အစိုးရ အားရင်ဆိုင်ရာတွင် အဘက်ဘက်မှ အသာစီးရပီး
ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး သက်တောင်.သက်သာ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင်.
အပွန်းအပဲ. အထိအခိုက် အနာတရ မဖြစ်စေရန် ရည်သန်ရ်ျ ခေတ်မှီ
လောကဓါတ် ပညာများ အသုံးအဆောင်များကို မဖြစ်မနေ ၀ယ်ယူသုံးစွဲ ရ်ျ
တိုက်ပွဲတော် ကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဆင်နွှဲကြရန် တညီတညွတ်ထဲ
ဆုံးဖြတ်ချက် များအရ .........
၁။ လေယဉ်တင် သင်းဘော တော်ကြီး ၅ စင်း
၂။ ရေငုတ် သင်းဘော တော်ကြီး ၂၅ စီး
၃။ ဖျက် သင်းဘောတော်ကြီး ၄၅ စီး
၄။ သံဗန် အစီး ၇၀၀၀ ခန်. ( ပြည်တွင်းဖြစ် )
၅။ လောင်းလှေ အစီး ၉၀၀၀ ခန်. ( တပတ်ရစ် )
၁။ M 1 တိုက်ခိုက်ရေးယဉ် အစီး ၅၀, ၀၀၀ ခန်.
၂။ ဘရက်ဒလေ အမျိုးအစား အပေါ.စား တိုက်ခိုက်ရေးယဉ် ၂၀၀,၀၀၀ ခန်.
၃။ 155-MM ဟောင်ဝစ်ဇာ အမြှောက် အလက် ၃၀,၀၀၀ ခန်.
လေကြောင်းတိုက်ပွဲ အတွက် ...
၁။ F 15 အစီး ၇,၀၀၀ ခန်.
၂။ F 16 အစီး ၉,၀၀၀ ခန်.
၃။ င်္F 18 အစီး ၅,၀၀၀ ခန်.
၄။ STEALTH ဗုံးကြဲလေယဉ် အစီး ၇,၀၀၀ ခန်.
၅။ AWAC လေယဉ် အစီး ၃၀၀ခန်.
၆။ နောက်ဆုံးပေါ် ဇီဝ လက်နက် များဖြစ်သည်. ဦးချိန်တီ ရွှေဘယက် တိုင်းရင်းဆေး
အမှတ် ( ၃၃ ) နှင်. နောက်ဆုံးပေါ် TV ကြော်ညာများမှ အလားတူဇီဝလက်နက်များကို
၀ယ်.ယူသုံးစွဲ ပီး နအဖ အားတိုက်ခိုက်သွားပါမည်။
မိမိတို. မျိုးချစ် ဖိုးချစ် ရဲရဲတောက်များမှ အသက်ကို ပဓါန မထားပဲ
ပြည်သူလူထုကြီးဧ။် ကိုယ်စား တိုက်ခိုက်ပေး ရန်အတွက် လိုအပ်သော အထောက်အကူ
ပြု လက်နက်ခဲယမ်း မီးတောက် ဖေါရှော များဝယ်ယူရန် ကုန်ကျ စားရိတ်များကို
ပြည်သူလူထုကြီးမှ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးအပ်လှူဒါန်း ကြပါရန်
မိမိတို. မျိုးချစ် ဖိုးချစ် ရဲရဲတောက် နယူးဂျန်နလေးယှင်း များမှ
ဘေးတော် အစ မြေးတော် အဆုံး သေးသောက် ခွက်ပျောက် ရဲရဲတောက်ကြီးများဧ။်
လမ်းစဉ်များအတိုင်း ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးသို. အသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။။။
youfightirich@gmail.com များသို. ၂၄ နာရီပတ်လုံးဆက်သွယ်လှုဒါန်း
ပေးကမ်းစွန်.ကြဲနှိုင်ပါကြောင်း.....မှတ်ချက် ငွေပမာဏ များပါက အိမ်တိုင်ယာရောက်
အောက်ဖေါ်ပြပါ နမူနာနှင်. ယှဉ်တွဲရ်ျ ကြည်.ရှုနှိုင်ပါသည်။
ရံပုံငွေ များ ထည့် ဝင်ပေးကြပါ
ဒီမိုကရေစီညီအကိုမောင်နှမအပေါ င်း တို့ ခင်ဗျား
၂၀၀၈ခုနစ် အတွင်းမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုဖေါ်ထုတ်ပြီးအပြီးသတ်အောင်ပွဲခံနိင်ဖို့ကျနော်တို
့ဖက်ပေါင်းစုံအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကို ကူညီပန့် ပိုး ပါ။ လူအား၊ ငွေအား ပန်
့ပိုးပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ကူညီမှုများကို အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။
တိုက်ပွဲဝင် ရဲရဲတောက်များသို. အထူးအသိပေးချက် ......
အလှူခံရရှိလာသော ပိုက်ဆံများကို ခွက်စောင်းမခုတ်ကြပါရန် ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရဲဘော်တို. တိုက်ပွဲမှာ ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် တိုက်ကြပါ။တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံး ဖမ်းမိ ရ်ျ
နိုင်ငံတကာမှ ဆုတံဆိပ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင်.ပါက ရဲဘော်တို.ကိုယ်စား
ကိုကိုကြောင်ချေးမှ အသက်ကိုပဓါန မထားပဲ ရဲဘော်တို.ကိုယ်စားလက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိဘပြည်သူ များဧ။် ပေးစာကမ်းစာကို မျှော်လင်.စောင်.စားလျှက်......
အရေးတော်ပုံ......................ဘယ်သောအခါ။။။ သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
ကြောင်ချေး ( ၆ယောက် ၃တန်း ပါလေရာ )
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလမ်းဘေးဈေးသယ်များ သမဂ ( မလသ ) ( ၂၀၀၈ )
Posted by ကိုကိုကြောင်ချေး at 1:32 PM0comments
အရှေ့ တောင်အာရှ ခွက်ပျောက်ရဲရဲတောက်ကြီးများ ဗျူရို (စင်္ကာပူ)
တိုလီမုတ်စ ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း အာဝါဒါး အော်ကြက် အမှတ် ( ၈၀၀၃/၂၀၀၈)
( နှလုံးရောဂါရှိသူများ သွေးပျက်တတ်သူများ မဖတ်ရ )
၁။• စစ်Aာဏာရှင်စနစ် Aမြစ်ပြတ်ခြေမှုန်းရေး• Aမျိုးသားသွေးစည်း ညီညွတ်ရေး• ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး• လူ့ Aခွင့် Aရေးနှင့် တရားမျှတမှု ထွန်းကားရေး• တန်းတူညီမျှရေးစသည့် Aခြေခံ Uီးတည်ချက် ၅ ရပ် ပေါ်တွင် Aခြေခံပြီး ပါတီစွဲ၊ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ဝါဒစွဲ ကင်းစင်သောကျွန်ုပ်တို့ မျိုးးဆက်သစ်လူငယ်များမှ မျိုးးချစ်ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ပေါင်းစု ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်Aာဏာရှင်စနစ် မြန်မာမြေပေါ်မှ လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရေး Aတွက် မည်သည့်Aဖွ့Aဲ စည်း နှင့်မဆို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သည် စစ်Aာဏာရှင်စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရေး Aတွက် မည်သည့်နည်းလမ်း နှင့်မဆို တိုက်ပွဲ ဝင်သွား မည်ဖြစ်သည်။
၄။ ရေရှည် ရေတို လမ်းစU်များချမှတ်ပြီး တိုက်ပွဲများ ဖော်ထုတ်သွား မည်ဖြစ်သည်။
၅။ သေးငယ်ကျစ်လစ်သော AစုAဝေးမှသည် ကြီးကျယ်ခိုင်ခံ့သော Aစည်းAရုံးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။
မျိုးချစ် ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ပေါင်းစု (စင်္ကာပူ)၂၉-၁-၂၀၀၈
အထက်ပါရဲရဲတောက် ခွက်ပျောက် များဧ။် လေမုန်တိုင်းအပေါ် ၆ယောက်၃တန်း
ပါလေရာကြောင်ချေး ( ရဲရဲတောက် နယူးဂျန်နလေးယှင်း ဌါနပေါင်းစုံ တာဝန်ခံ
မလသ ) ဧ။် သဘောထားအမြင်
အတိတ်ကာလ လွန်လေပီးသော နှစ် ပေါင်း ၅၃ နှစ်ခန်.က ရွှေနိုင်ငံတော်တခုလုံးတွင်
အရဲဆုံး ဆွေးနွေးပွဲအများဆုံး ညှပ်မလို ကြီးများ အများဆုံး ပါတီကြီးတခုဧ။်
၂ နှစ်အတွင်း စစ်အနိုင်တိုက်ရေး လမ်းစဉ် တော်ကြီး ကဲ.သို. အောင်မြင်မှုအပေါင်း
သရဖူဆောင်း နှိုင်ပါကြောင်း လေးလေးနက်နက် မှတ်ချက်ပြုပေးလိုက်ပါကြောင်း...။။။
အတိတ်ကာလမှ ရဲရဲတောက်ကြီးများဧ။် ရိုးမ မှ သည် ရွှေလီဆီသို. တော်လှန်ရေး
ကြီးအတိုင်း အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြင်. တိုက်ပွဲတော်ကြီးကို ဆင်နွှဲနှိုင်ပါစေဟု
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ နွားကျောင်းသားများ အဖွဲ.ချုပ် ( ဗနသ ) မှလည်း
ကြောင်ချေးတို.ဧ။် ( မလသ ) နည်းတူ ထပ်တူထပ်မျှ တသားထဲရှိကြောင်း
( ဗနသ ) မှ လူကြီးမင်းများ နွားကျောင်း
သွား ရင်း သန်းရှာနေပါသော ကြောင်. ကြောင်ချေးမှ ကိုယ်စားထုတ်ပြန်ပေးလိုက်
ရပါကြောင်း သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်း အပေါင်းတို.အား အသိပေးလိုက်
ရပါသည်ခည။။။သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
အရေးတော်ပုံ.............ဘယ်သောအခါ..။။။သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
( ၆ယောက် ၃တန်း ပါလေရာကြောင်ချေး )
မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ လမ်းဘေးဈေးသယ်များ သမဂ ( ၂၀၀၈ )
Khon Mya Hlaing,
The dogs are baking on the road. So, please shut the door and sleep so well. Oh! i am not lucky today, on the way to Khon May Hlaing, I am meeting Naapah fellow dogs and unbelieveable man who dares to blame General Aung Sun. Shup up guys (or gays)!This blog is not for such -----( i can't find the right words for both of u but u r so disgusting).
Ok, see u later Khon Mya Hlaing. I will be back when the dogs already gone to the toilet of Than Shwe.
တချို့လူတွေဟာဘာလို့ အဖြူကိုတွေ့နေရဲ့သားနဲ့ အမည်းလို့ငြင်းချင်နေကြတာလဲမသိဘူး။ အစ်မရဲ့စာအရေးအသားတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ ကော်မန့်တွေကိုချက်ကျကျ ပြန်ဖြေနိုင်တာကို လဲ အားကျတယ်။ အားပေးနေတယ် အစ်မ။